Ngethuba lethu, abantu bahluke ngokuthe ngqo kumashishini ekuthengiseni. Omnye uphelele kakhulu kuye, kwaye umntu unomdla. Abanye bacinga ukuthengiswa kwe-intanethi ibhizinisi elithembisayo, kunye nabanye-ukuxhatshazwa okuqhelekileyo. Kwaye kwabanye, le yindlela eyongezelelweyo yokufumana imali. Ukuba uthatha isigqibo sokuba uzame ngokwalo hlobo lomsebenzi, kufuneka uqale ufumanise ukuba yiyintoni kwaye yiyiphi inzuzo kunye nokungonakali kokuthengiswa kwenethiwekhi.
Ngokwezibalo, kuphela i-10-15% yabantu abaye bathetha ukwenza ukuthengiswa kwenethiwekhi, bafezekise umphumo. Ingeniso yabo ingafikelela kumawaka amaningana kunye namakhulu amawaka eedola. Bonke abanye bafumana encinci okanye abazuzi nhlobo. Kukho abantu abatyala imali yabo kweli shishini, kodwa ekugqibeleni abaphumelelanga kwaye bahlala benamatyala. Abantu abanjalo kwaye bashiye eli shishini, ngenxa yabo kwaye kukho imbono engalunganga malunga nokuthengisa intengiso.
Mhlawumbi, abaninzi banomdla kulo mbuzo, ngaba kunokwenzeka ukuba ufumane kakuhle ekuthengiseni intengiso? Akukho mpendulo enye kulo mbuzo. Kukho abantu abaphumelele ukuphumelela, kwaye kukho abo abangazange bafezekise nayiphi na iphumo okanye esi siphumo sasingabalulekanga. Kwaye kukho inkcazo yale nto.
Yona imigaqo yokuthengiswa kwentengiso ayikho entsha kwaye ayikhethi. Iimpawu zalo zihambelana naluphi na uhlobo oluphumelelayo lwezoqoqosho. Kukho umvelisi ovelisa iimpahla, kwaye kukho umthengisi jikelele - iqumrhu elithengisa le mveliso. Kule meko, umthengisi unenzuzo enkulu kunazo zonke ngenxa yerhafu enkulu. Unika iimveliso kwindawo yokugcina impahla, kwaye ukusuka apho ufumana urhwebo lwentengiso.
Ngalunye unxibelelwano kule kholeji ufumana isabelo salo senzuzo. Ukuphakama kwakho kule ndawo, inzuzo yakho enkulu. Umthengisi ufumana ubuncinci. Umnikazi wesithuba ufumana ngaphezulu, umnini wendawo encinane yokugcina impahla-nangaphezulu, njl. Oku kufana nesakhiwo sokuthengiswa kwentengiso, kodwa kukho umehluko omnye - amathuba omthengisi wokuba ngumnini wevenkile akancinci. Oku kuya kufuna imali enkulu. Ngoko ke, ithemba elibonakalayo labasebenzi abasebenzisa umvuzo liphantsi kakhulu. Into emele ilindeleke kuloo msebenzi yinyuka yemvuzo ngenxa yokusebenza komsebenzi wabo.
Ngokwemvelo, ukuthengiswa kwenethiwekhi kunomlinganiselo weentlukwano kwizorhwebo zendabuko. Ingundoqo yazo - iziqhagamshelo zesakhiwo sokuthengiswa kwenethiwekhi asinenkampani, kodwa abantu abenza njengabashicileli bekampani. Banikezela ukuhamba kweenkonzo kunye neempahla ezivela kumvelisi kumsebenzisi wokugqibela. Ukungabikho kwababambisi kunceda ukufumana inzuzo enkulu. Ukunyuka kwezitebhisi kuxhomekeke kuphela kwiimpawu zakho kwaye akufuneki nayiphi na imali-mali. Ukuba awunayo iprojekthi yokuqala kunye nokunxibelelana okulungileyo, ngokokuthengiswa kweewebhsayithi yenye yeendlela ezimbalwa zokuphumelela ngemali.
Akuqhelekanga ukuva ukuba ukuthengiswa kwentengiso kuyinto efanayo "ipiramidi". Kodwa oku akude kwimeko. Iinkampani ezibandakanya ukuthengiswa kwenethiwekhi, ngokungafani ne "pyramid", zithengisa iimpahla zangempela, zifuna iimfuno ezithile kunye nexabiso langempela. "Iipiramidi" kwifom yazo ecocekileyo ayinayo nayiphi na impahla. Kodwa kukho oko kuthiwa "iipiramidi ezifihliweyo" ezithengisa iimpahla ngexabiso elingenangqiqo, echaza ubuninzi bayo beempahla. Njengomthetho, akukho ziqinisekiso zekhwalithi zalo mveliso. Enye yeemeko ezinyanzelisayo zokubambisana nezo nkampani kukuthenga inani elithile leempahla ezinikezwa yinkampani ngenani elithile. Impawu eqhubekayo yepiramidi eqhelekileyo kukufuna abo banqwenela ukuthenga isethi enye yemveliso.
Iinzuzo zokuthengiswa kwenethiwekhi
- Unako ukuphumelela impumelelo, eya kuzisa imali efanelekileyo.
Ishedyuli yomsebenzi wamahhala - usebenza xa ufuna kwaye uninzi kangakanani, ongenakwenzeka kwezinye iintlobo zoshishino.
- Imfundo ekhethekileyo kunye nokutyalwa kwezimali ezinkulu akudingeki.
- Unako ukuxhasa, ukubanceda nokukhuthaza abantu owakhangayo, okuyo ngenxa yoko kuza kwandisa inzuzo yakho.
- Ungasebenzisa naluphi na ulwazi olusisigxina kunye nolwazi lokuthengisa oluya kukunceda ukhange abantu abaninzi kwaye wandise ukuthengisa.
- Emva kokuba uthengise ukuthengiswa kwenethiwekhi, unakho ukulibala ngeengxaki zemihla ngemihla kwaye ulahlekelwe ukunganeliseki ngobomi.
Iingxaki zokuthengiswa kwenethiwekhi
- Njengawo nawuphi na uhlobo loshishino, kukho isabelo esithile somngcipheko wokuthengisa intengiso.
- Indlela engafanelekanga yabasandul 'ukuza kule shishini ibangela ukuba bahluleka kwiinyanga zokuqala zomsebenzi.
- Kukho umngcipheko wobudlelwane obubhubisayo kunye nezihlobo kunye nabahlobo, ukuba uyabatsala kule shishini, kwaye ngenxa yesizathu esithile abazange bakwazi ukufikelela kwisiphumo esifanelekileyo.
- Ukukhetha ngokwenene indlela efanelekileyo yokuthengisa intengiso, kuya kufuneka usebenze nzima.
Ukwahlula inkampani enkulu yokuthengisa intengiso kwi-pyramid, qaphela ukuba kufuneka utyalomali imali ebalulekileyo ukuze uqalise ukubambisana nenkampani enjalo. Ngokuqhelekileyo, kwiinkampani ezinzulu, iindleko zakho eziphambili ziya kuba kukuthengwa kweencwadi zemfundo. Namhlanje, iinkampani zokuthengisa zentengiso ezizama ngokukodwa ukunika ulwazi, kwaye kungabikho ukukhwela imali emininzi - eli lihle elihle lokwenza umsebenzi.
Inkxalabo kunye nomsebenzi-msebenzi we-2009
Ukuhlawula iinkonzo zokunakekela abantwana
Izindlela zokuma emsebenzini
Indlela yokuthetha ngokuchanekileyo nabasebenzi baseofisi?
Indlela yokuphumelela ebomini
Ingcamango yomsebenzi wezoshishino, udidi kunye nezigaba zophuhliso
Ukukhangela uYobhi kwintlangano kaRhulumente
Isaladi kunye neerothi kunye neelentile
Intsalela yeenwele ezintle: umgubo werhasi
I-stewed strawberry ne-sweet cherry i-compote
Unyango lwezilwanyana ezinobuncwane kwi-citrus kumntwana
I-Cons in sishwankathelo: indlela yokuyijika ibe yimpumelelo
Iipropati kunye nokusetyenziswa kwe-neroli yeoli
U-Goof noKeti Topuria baqinisekisile imicimbi yabo eyimfihlo, ifoto
Ukuphakama kwezemidlalo: indlela yokukhetha ifom yezingane ezifanelekileyo kwimidlalo
Ukuphupha ukufa kwakho
Indlela yokudibanisa ngokuhlwa kunye nabahlobo
I ngulube ehleliwe
Yithi "hayi" ukulahleka kweenwele: zokupheka kwi-shampoo efanelekileyo yekhaya
Indlela yokurhoxisa i-dandruff, izilwanyana zomntu